शेयर घोटालामा राष्ट्र बैंकको साथ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल बामपन्थी सरकार बनेपछि केही अफ्ठयारोमा छन । डा. नेपालले कांग्रेसका कर्मचारीहरुको मात्र कुरा सुनेर निर्णय गर्ने गरेकोमा बामपन्थी कर्मचारीहरु बिगतदेखि नै रुष्ट थिए । उनीहरु नयाँ सरकार बनेपछि गभर्नर डा. नेपाललाई असहयोग गर्ने मनस्थितिमा छन । बामपन्थी कर्मचारीहरुको असहयोगपछि सरकारले पनि पेल्ने हो कि भनेर उनी चिन्तित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि बिगतमा आफुले कुनै गलत काम नगरेको भनेर बिबादास्पद ब्यवसायी अजेयराज सुमार्गीलाई बिभिन्न नेताकोमा पठाएर गभर्नर डा. नेपालले नयाँ सरकारसँग सुमधुर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन । सुमार्गीको रोक्का रकम गभर्नरमा डा. नेपाल नियुक्त भएपछि फुक्का गरिएको थियो । सुमार्गीलाई डा. नेपालले ठुलो सहयोग गरेका थिए । अहिले बिगतको त्यो सहयोगको गुन तिर्न सुमार्गी नेताहरुकोमा दौडिरहेका हुन । तर अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुमार्गी र डा. नेपालको मिलेमतोलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताइन्छ । अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले नै गभर्नर हुँदा सुमार्गीको रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यो रकम फुक्कादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा धेरै निर्णय निहित स्वार्थपुर्ति गर्ने उद्देश्यले भएकोमा डा. खतिवडाको टिम स्पष्ट रहेको बताइएको छ । डा. खतिवडाले गभर्नर नेपाललाई केही सुधारका काम गर्न निर्देशन दिने र ती कामको आधारमा डा. नेपालसँग व्यवहार गर्ने योजना बनाएका छन । नयाँ सरकारले दिएका काम राम्रोसँग नगरेमा गभर्नर डा. नेपाललाई हटाइने बताइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले सुमार्गीको रकम फुक्का गर्ने र केही बैंकलाई काखी च्यापेर अरु बैंकलाई भने पेलिरहेको बताइन्छ । समाचार स्रोतका अनुसार डा. नेपालले प्रभु बैंक र नपाल बँगलादेश बैंकलाई आबश्यकताभन्दा बढी च्यापेर उनीहरुको फाइदामा काम गर्ने गरेका छन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेलाई अघि सारेर ती बैंकहरुलाई हित हुने गरी काम गर्ने गरेका गभर्नर डा. नेपालले प्रभु बैंकमा ग्राण्ड बैंक मर्ज गर्दा आर्थिक अनियमितता गर्न सहयोग गरेको दाबी समाचार स्रोतको छ । स्रोतका अनुसार प्रभु बैंकका देवी प्रकाश भट्टचन र अशोक शेरचनको इशारामा ग्राण्ड बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज गर्दा प्रभु बैंकको १ सयको सेयरको भाउलाई १ सय २१ रूपैयाँ बनाइएको थियो । ग्राण्ड बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज हँुदा उसको १ सय रूपैयाँको सेयरको भाउ ६५ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपाल सहितको एउटा लोभीपापी समूह प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन, सीईओ अशोक शेरचनको प्रभावमा परेपछि हजारौं सर्वसाधारण शेयर धनीहरू मर्कामा परेका छन ।
नियम कानूनभन्दा पनि भेटीघाटी चढाएर आफ्नो काम फत्ते गराउनमा माहिर भट्टचन र शेरचनले लैनचौरस्थित प्रभु बैंकको घर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भाडामा दिएका छन । सो घरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका केही बिभागहरु रहेका छन । त्यसमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको बताइन्छ । केन्द्रीय बैंकले आफू मातहतको बाणिज्य बैंकको भवनमा भाडा तिरेर बस्न नमिल्ने भनेर आवाज उठे पनि त्यसको सुनुवाई भएको छैन । नैतिकताको प्रश्न उठे पनि त्यसको बारेमा गभर्नर डा. नेपालले केही बोलेका छैनन् । विगतमा डा. खतिवडा गभर्नर हुँदा पदीय दुरूपयोग गरेको आरोप लगाउने कार्यकारी निर्देशक पाण्डेको पहलमा प्रभु बैंकको शेयरको रकम बढाउने काम भएको थियो ।
बिगतमा गभर्नर डा. नेपाल र कार्यकारी निर्देशक प्रभु बैंकप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुने गरे पनि केही समय यता आएर प्रभु बैंकले जे चाहन्छ, त्यही निर्णय गर्ने बिन्दुमा कसरी पुगे ? खोजिको बिषय बनेको छ । कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशक हुँदाहुँदै पनि डेपुटी गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा सबैलाई उछिन्ने गरी चर्को दौडमा हिंडेका पाण्डेले राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूमा आकर्षक थैली भेट गर्न यही अक्वाएरको नयाँ सिद्धान्तलाई हतियार बनाएको दाबी समाचार स्रोतको छ । बैंक एक्वायरको नाममा राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीले जनही एक करोड रुपैंया बुझेको भनेर प्रभु बैकका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन । उनीहरुले बताएको कुरा सत्य भएको दाबी समाचार स्रोतको छ । यदी त्यसो नभएको भए प्रभुको शेयरको मुल्य बढाउने काम हुने थिएन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई थप सुविधासमेत दिएको छ । ग्राण्ड बैंकसंग मर्ज पश्चात् एकीकृत कारोबार प्रारम्भ गरिसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको नियमन विभागको विशेष पहलमा उक्त बैंकलाई राइट सेयरमा विशेष सुविधा दिइएको छ । जुन काम कानुनसम्मत नरहेको बताइन्छ । २०७२ माघको अन्तमा एकीकृत कारोबार थालिसकेपछि प्रभु बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनामा उसका ग्राण्डसंग मर्ज हुनु अघिका सेयर होल्डरहरूलाई मात्र आकर्षित हुनेगरी राइट सेयरको सूचना जारी गरेको छ । दुबै संस्था मर्ज भएपछि यसो गर्न नमिल्ने बैंकिङ क्षेत्रका ज्ञाताहरु बताउछन । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको प्रभु बैंकसँग सम्बन्ध राम्रो भएको भन्दै गभर्नर डा. नेपाल र कार्यकारी निर्देशक पाण्डले अर्थ मन्त्रीलाई खुसी बनाउन पनि प्रभु बैंकको काम गर्ने गरेको भनेर अन्य अधिकारीहरुसँग भन्ने गरेका छन । तर उनीहरुले अर्थ मन्त्रीलाई खुसी बनाउनलाई होइन, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न प्रभु बैंकको लागि आबश्यक पर्ने जे काम पनि नियम मिचेर गर्ने गरेका छन ।
नेपाल बँगलादेशमा पनि घोटाला
शेयर दलालीसँग मिलेर ८० प्रतिशत राइट शेयर जारी गर्दा ८ लाख शेयर फर्जी रुपमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्दा पनि नेपाल बंगलादेश बैंकका अधिकारीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै कारबाही गरेको छैन । सो बैंकको जग्गा खरिद सफ्टवेयर परिवर्तनमा पनि भ्रष्टाचार भएको बताइन्छ । बैंकका कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले शेयर र जग्गा खरीद लगायतमा भ्रष्टाचार गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने डरले पुर्व प्रधानमन्त्री शेउबहादुर देउवाका साला भूषण राणालाई प्रयोग गरेर अख्तियारमा दबाब दिन लगाइएको छ । ढुंगानामाथि कमलादीको जग्गा खरिद र बैंकको सफ्टवेयर खरिदमा छानबिन सुरु गरेर पनि हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको कारण भुषणको प्रयासले काम गरेको चर्चा हुने गरेको छ । बंगाली सञ्चालकहरुलाई खुशी पार्न जति पनि अनैतिक काम गर्न उक्सने र आफ्ना लागि कमिशनको जोहो गर्ने ढूंगानाबिरुद्द अख्तियारमा दर्जनो उजुरी परेको बताइएको छ । बैंकका लागि खरिद गरेको सवा करोडको गाडी यिनले आफ्नै नाममा पास गराएको उजुरी पर्दा पनि उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै कारबाही नगरेपछि बैंकहरुमा यस्ता घोटाला बढदै जान थालेका छन ।
अहिले गभर्नर डा. नेपाल र कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले प्रभु र बँगलादेश बैंकलाई आबश्यकताभन्दा बढी छुट दिने र कुनै छानबिन नगरेपछि अन्य बैंकहरुले पनि त्यसैको सिको गर्न थालेको बताइन्छ । केही समय अघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बिशेष अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउदै एक रिपोर्ट तयार गरेको थियो । केन्द्रको रिपोर्टमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि राम्रो अनुगमन नगरेको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता भए पनि राष्ट्र बैंक मौन बसेको भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पटक पटक भनिसकेको छ । तर राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यशैलीमा कुनै सुधार गरेको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यो शैलीमा सुधार हुन्छ कि हुदैन ? प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।